यस लेखमा जर्मन शब्दहरू कण्ठ कसरी गर्ने? हामी जर्मन शब्दहरू कण्ठ गर्ने तरिकाहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौं। सामान्यतया, सकेसम्म धेरै शब्दहरू सिक्नु भनेको जर्मन र अन्य विदेशी भाषाहरूमा हासिल गर्ने पहिलो लक्ष्य हो।
यस बिन्दुमा, सिक्ने खेलमा आउने शब्दहरू कण्ठ गर्ने विधिसँग साकार गरिन्छ। हामी शब्दहरू कण्ठ गर्ने समस्यामाथि विजय हासिल गर्नेछौं, जुन जर्मन सिक्न र विदेशी भाषा सिक्नको लागि अझ उन्नत तहसम्म पुग्न चाहनेहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, तपाईंसँग सजिलो र प्रभावकारी विधिको बारेमा कुरा गरेर। हामी विश्वास गर्छौं कि तपाईं यो यादगार विधिसँग सफल हुनुहुनेछ, जसलाई हामी जर्मन शब्दहरू कण्ठित गर्नका लागि सजिलो तरीका भन्ने गर्दछौं।
जर्मन शब्द मेमोरी मेमोरी प्रविधिको साथ
कहिल्यै नबिर्सनुहोस् जर्मन शब्दहरू कण्ठ गर्ने सबै भन्दा प्रभावकारी तरीका भनेको जीवनको सबै क्षेत्रहरूमा भिजुअल मेमोरी प्रयोग गर्नु हो। थप रूपमा, मेमोरीलाई जीवित राख्ने तरिका हासिल गरेको जानकारी चित्रण गरेर हो। यदि तपाइँ सामान्य तरिकामा याद गरी शब्द दोहोर्याउँनुहुन्न भने, जानकारी सजीलो मेटिनेछ र बिर्सिन्छ। यी सबै कारणहरूलाई विचार गर्दा, जब तपाईं जर्मन शब्दहरू कण्ठ गर्न लाग्नुहुन्छ, तपाईं प्रत्येक स्मृतिमा प्रत्येक शब्द चित्रण गर्नु पर्छ। इलस्ट्रेसन टेक्निकको साथ याद भएका जर्मन शब्दहरू तपाईको दिमागमा सजिलैसँग आउँदछन् जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
कसरी जर्मन शब्दहरू मेमोरी प्रविधिको साथ सम्झन?
यदि तपाईंलाई जर्मन शब्दहरू कण्ठ गर्न कठिनाई भइरहेको छ भने, यसले तपाईंको दिमागको कार्य सिद्धान्तको बारेमा कुनै ज्ञान छैन भनेर संकेत गर्दछ। दृश्य मस्तिष्कको काम गर्ने सिद्धान्तमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। चित्रहरू भण्डार गरिन्छ जब तिनीहरू मस्तिष्कमा पठाइन्छ, र मस्तिष्कले याद गरेको कुरा याद गर्न सक्दछ, पढेको वा सुनेको छैन। यस कारणका लागि, साना कार्डहरूमा लेखिएका शब्दहरू वा सचित्र कार्डहरूमा शब्दहरू सम्झन यो धेरै सजिलो हुन्छ। जब व्यक्तिले आफ्नो दिमागमा हेरेको तस्बिरलाई एनिमेटेड गर्दै छ, तल शब्द स्वचालित रूपमा देखिन्छ। समान विधि कार्डमा लेखिएका शब्दहरू याद गर्नको लागि लागू हुन्छ। उनीहरूको हातमा भएका कार्डहरूको समीक्षा गरेर र पछि, मानिसहरूले वास्तवमै प्रत्येक पटक यसको तस्विर लिन्छन् र मस्तिष्कमा पठाउँछन्। यस तरीकाले, मेमोरीकरण सहज हुन्छ। तपाईंले यो याद राख्नु पर्छ कि तपाईं आफ्नो जीवनको सबै क्षेत्रमा मेमोरी टेक्निकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंले निश्चित रूपमा उदाहरणको विधि प्रयोग गर्नु पर्छ जुन एउटा मेमोरी टेक्निकलाई जर्मन शब्दहरू सम्झने सजिलो तरीकाको रूपमा छ।
प्रिय मित्रहरु, हामी तपाइँलाई हाम्रो साइटमा केहि सामग्रीको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छौं, तपाइँले पढ्नु भएको विषय बाहेक, त्यहाँ हाम्रो साइटमा निम्न विषयहरू पनि छन्, र यी ती विषयहरू छन् जुन जर्मन विद्यार्थीहरूले थाहा पाउनुपर्दछ।
हाम्रो साइट मा तपाइँले चासो को लागी धन्यवाद, हामी तपाइँ तपाइँको जर्मन पाठ मा सफलता को लागी धन्यवाद।
यदि त्यहाँ कुनै विषय छ जुन तपाईं हाम्रो साइटमा हेर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं यसलाई फोरम क्षेत्रमा लेखेर रिपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
एकै तरीकाले तपाई हाम्रो जर्मन शिक्षण विधि, हाम्रो जर्मन पाठ र फोरम क्षेत्र मा हाम्रो साइट को बारे मा कुनै पनि अन्य प्रश्नहरु, रायहरु, सुझावहरु र सबै प्रकारको आलोचना लेख्न सक्नुहुन्छ।